Yan Aung: ချမ်းမြေ့စေရာ မိမာတာ...
ဖတ်တဲ့သူကပဲ စိတ်နုလွန်းတာလား မသိ..။
လေးမ မျက်ရည်တွေ ၀ဲတက်လာတယ်...။
ကိုရန်အောင် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘ၀မျိုး ဖြစ်ခဲ့ပြီ မဟုတ်လား..။ ချွေးမ အလိမ္မာလေး မြန်မြန်ရှာပြီး အမေ ကို ခေါ်ထားလိုက်ပေါ့ ..။
My dear Ko Yan Aung!
You are right. Try the best for your mum and for you. My mother always said me these words like that" Oh my daughter, spread out your wings and fly as far as you can, I am always proud for you".
Be the best for your Mother and MOTHER LAND !
ခံစားချက်နဲ့ အပီရေးထားလို့လားမသိ အရမ်းကောင်းတယ် ကိုရန်အောင် :)
ကိုရန်ရဲ့ ပို့စ်တွေထဲမှာ ဒီပို့စ်လေးကို ပိုသဘောကျတယ်။ ရင်ထဲထိရောက်သွားစေတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ အရေးအသားပါ ကောင်းလွန်းနေတော့ ကျွန်မတောင် အသက်ရှုဖို့ မေ့နေပြီ ကိုရန်...